Mpivarotra akanjo marika, lamaody sy fivoahana tsy ho ela - Stockmarca
WHATSAPP IHANY +34 667 768 353
Fivarotana akanjo misokatra
Ny FW22 Collection Fampahalalana misimisy kokoa
Atsangano ny varotrao
Amin'ny fomba tena tsotra dia azonao atao ny manangana ny e-varotrao ary manao dropshipping. Ampidiro ny katalaoginay amin'ny vokatra 700 mahery ao anaty tahiry ary midira amin'ny tontolon'ny Internet.
Manana magazay an-tserasera ve ianao?
Raha tsy manana tranokala ianao dia hanome anao iray, araka izay tianao. Miaraka amin'ny sehatra sy logo voafidinao. Ary raha efa manana izany ianao dia aza manahy fa mikarakara ny fametrahana ny fitaovana fampidirana katalaogy izahay mba hahafahanao manomboka mivarotra eo noho eo.
Mikarakara ny fandefasana entana izahay
Miaraka amin'ny serivisy Dropshipping anao dia hanana referansa an-jatony hahombiazana amin'ny fivarotana an-tserasera ianao. Tsy mila miahiahy momba zavatra hafa ankoatry ny fivarotana ianao satria nataonay ny fandefasana.
Manoro hevitra anao izahay amin'ny marketing
Manoro hevitra anao izahay hanome ny fampisehoana tsara indrindra amin'ny tambajotra sosialy. Toa tena ilainay ny manao dokam-barotra ao amin'ny Instagram sy Facebook ary noho izany dia hamaha ny fisalasalana rehetra anananao izahay.
Vokatra an'arivony maro ao anaty tahiry misy fandefasana avy hatrany
Mitantana ny Stocko izahay
Mpizara iray amin'ny marika lamaody, kojakoja ary kiraro kiraro ve ianao? Izahay no mitantana ny tahiry ary mivarotra izany ho anao. Manana traikefa sy portfolio-mpanjifa marobe izahay ahafahanay mandefa ny tahirinay sy mivarotra izany nefa tsy mila miahiahy na inona na inona izahay.
Inona no vaovao amin'ny andiany
Manolotra anao akanjo marobe manokana izahay amin'ny vidiny tsara indrindra. Ny marika tsara indrindra miaraka amin'ny fandefasana entana eo no ho eo am-panamboarana amin'ny tranobenanay manokana. Mampifanaraka ny filanao sy ny teti-bolanao ianao.
The North Face Men's Bundle
Crocs Footwear Lot
Lot Michael Kors Vehivavy
Tena tia vehivavy Moschino
LiuJo Vehivavy Be
Vehivavy Lot Karl Lagerfeld
CLK Men's Polo Textile Lot
Napapijri Man Textile Lot
Sorbino Loteran-damba ho an'ny lehilahy
Lehilahy sy vehivavy maro kiraro Fila
Harvey Lehilahy sy Vehivavy lamba lamba
Jereo betsaka azo alaina
Miaraka aminao amin'ny dingana rehetra izahay hanolotra anao ny serivisy tsara indrindra sy ny toro-hevitra ilaina mba hahatonga ny fianaranao amin'ny tontolon'ny lamaody hahomby tanteraka.
Sokafy ny fivarotana akanjo ara-batana sy an-tserasera
Fenoy ny fivarotana anao amin'ny vokatra farany be indrindra sy takiana. Ary raha mila izany ianao dia mamorona ny tranonkalanao izahay mba hahafahanao mivarotra an-tserasera ihany koa.
Dropshipping ary manadino momba ny tahiry
Miaraka amin'ny serivisy Dropshipping dia hanana réperto an'arivony ianao hahafahanao hahomby amin'ny fivarotana an-tserasera. Mampifandray ny katalantsika amin'ny tranokalanao sy hikarakara ny fandefasana. Inona no tsy mahazo tranokala? Manao izany ho anao izahay ary mampianatra anao ny fomba fampiasana azy.
Ny katalaogy an-tserasera tsy tapaka hatrany
Manavao ny stock izahay mandray ireo vokatra vaovao isan'andro isan'andro miaraka amin'ny andinin-teny mihoatra ny 30.000 amin'ny fanavaozana tsy tapaka. Fifampidinihana mba hahafahanao manolotra ny mpanjifanao izay tena takian'ny tsena.
Serivisy sy fifantohana
Serivisy mpanjifa voaofana tsara amin'ny sehatry ny sehatra any Espaina. Miaraka amin'ny fanohananana ny traikefa mihoatra ny 30 taona ary mpanjifa mihoatra ny 2000 manerana an'i Eoropa.
Mpizara marika malaza ve ianao? Izahay no mitantana ny tahiry ary mivarotra izany ho anao. Tsy mila manahy na inona na inona ianao, miasa ho mpanelanelana eo aminao sy ny mpanjifa farany izahay. Efa 30 taona mahery izahay no nitantana ny tahirim-bolan'ny mpaninjara anay miaraka amin'ny valim-barotra mahafinaritra.
Nifantoka tamin'ny varotra
Manampy anao izahay amin'ny fotoana rehetra hanararaotra ireo fantsona mahomby indrindra mahomby. Mivarotra na any amin'ny fivarotana ara-batana sy fantsona an-tserasera, miaraka amin'ny stock-nao na amin'ny serivisintsika Dropshipping.
ZAVA-DEHIBE: Tsy mivarotra fitafiana an-tànana na milanja, na fanaka ara-barotra izahay.
Sokafy ny fivarotana fitafianao
Izahay dia manome ny vokatra rehetra ho an'ny fivarotanao amin'ny alàlan'ny famenoana tsy tapaka, mizara ny zavatra niainanay taminao. Tsy misy franchise, tsy misy royalty, tsy misy frais, tsy exclusivity. Amin'ny Stockmarca dia hanana ny fahalalahana sy ny fifehezana tanteraka ny orinasanao hampivoatra azy araka ny tadiavinao ianao.
Te hahafantatra bebe kokoa aho
Araho izahay amin'ny Instagram
Holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao hanombohana ny fanamboarana ny nofinofy amin'ny tongotra tsara indrindra. Ary raha efa manana fivarotana ianao, dia hanome anao ny tahiry amin'ny marika tsara indrindra izahay mba hanananao vokatra tena tianao sy amidy. Satria tsy mampatahotra ny mitsambikina dia izay tsy mampatahotra dia tsy miaina amin'ny faniriana hanao izany.
WHATSAPP IHANY: 667-768-353
Ora fiasana sy serivisy ho an'ny mpanjifa: Alatsinainy ka hatramin'ny alakamisy manomboka amin'ny 9:00 ka hatramin'ny 17:30 hariva ary ny Zoma manomboka amin'ny 8:00 ka hatramin'ny 16:30 hariva.
Contacto / About us / Marika miavaka / Legal / fanondranana